Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): BREAKING: Police Fire on Protest Residents at Copper Mine, One Shot Dead
BREAKING: Police Fire on Protest Residents at Copper Mine, One Shot Dead
at 12/22/2014 07:39:00 PM
Kamayut Media's status update.
လက်ပံတောင်းဒေသတွင် ဒေသခံများနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပြီး သေနတ်ဒဏ်ရာကြောင့် မိုးကြိုးပြင်ရွာမှ ဒေါ်ခင်ဝင်း ဦးခေါင်းထိမှန်ပြီး သေဆုံးသွားခဲ့သည်။ အခြား ဒေသခံ ၂ဦးမှာလည်း မျက်နှာနှင့် ဦးခေါင်းတွင် ပြင်းထန်သော ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့ကြသည်။
ပထမဆုံးအကြိမ် တရုတ် နှင့် မြန်မာပြည်ရှိ ကချင် တက္ကသ...
Hpakant Ginra KIA Masat (2) Dap Ba, Dap Dung (6) G...
Dap Ba (2) Dung6ginra, Lai Nawng HKu de Myen bai...
Laiza, ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်း ပစ်ခတ်ခံရမှု (၁)လပြည့် ...
This week in 1885 - the end of independence.
People of 2014 (MYANMAR)
လက်ပံတောင်းတောင်မှ တရုတ်လူမျိုးလုံခြုံရေးတွေနဲ့ အစ...
မျိူးချစ်ဗိုလ်လောင်းများ ကျဆုံးခဲ့မှု တစ်လတင်းတင်း...
Unknown gunmen attackedapolice station Lashio
BREAKING: Police Fire on Protest Residents at Copp...
Hugawng Danai moi na pati duwa amat usa Duwa Ngan ...
ကချင်လူမျိုးအတွက် KIO/KIA မရှိခဲ့ရင်
၂၀၀၇ ရေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ဘုန်းကြီး များ ကိုသတ်ဖြတ...
Danai Buga, Tarung Mare Hkalupahpung de 50 ning ...
Rawt Malan ai ngu ai gaw...
နိုင်ငံရေး အာမခံချက် မရှိဘဲ ပြည်တွင်းစစ် မရပ်စဲနို...
အမေရိကနိုင်ငံမှာ Federal Army ဆိုတာရှိတယ်
UNFC gaw myu baw sang niantsa hta teng sha ga sa...
USA na asak 15 ning re Jawng ma gaw Jinghpaw mung ...
Kachin Alliance meeting with UNFC General Secretar...
ကချင်ပြည်နယ် ပူတာအို ဒေသကိုလဲ ဗမာတွေမပိုင်ဘူး
Seng Ing Maranashagun laika
ဗမာတပ်၏ လမ်းပိတ်မှု ကြောင့် ကချင်ပြည်နယ် အနောက် ဘက...
စစ်ရှိန် လျှော့ချရေး အတွက် အစိုးရနှင့် ညှိနှိုင်းမှု...
Who Are Kachin?
Protest against Nov. 19th Unprovoked Attack By Bur...
ပြည်ပဂီတလမ်းကြောင်းထိ ထိုးဖောက်နိုင်တဲ့ အမွန်း ဘာေ...
Beyond the sectarian fighting lies Myanmar's dark ...
Politicians have their priorities..
ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော် ပြောသော Nov,(19)အစိုးရတပ်၏ ပစ်ခ...
New York Time, Searching for Burmese Jade, and Fin...
"လက်နက်ကြီးတပ်ဆင်ထားသည့် ခရာဘွမ်မှအစိုးရတပ်စခန်း မ...
တိုင်းရင်းသား အားလုံးစုပေါင်းပါဝင်ဖွဲ့စည်း ထားသည့်...
No.1 lang na Jinghpaw pilotasumla
Invitation to Kachin Demonstration ( Dec .06 .2014...
Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT...
မြန်မာသံတော်ဆင့် နှင့် ဗိုလ်ချုပ် ဆွမ်လွတ်ဂွန်မော်...
Sweet December (song )